मध्यरातमा डकैती गरियो : वर्षमान पुन - Himali Patrika
मध्यरातमा डकैती गरियो : वर्षमान पुन
हिमाली पत्रिका ८ जेष्ठ २०७८, 5:18 am
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पुगेन भनेर राष्ट्रपतिबाट आएको निर्णयलाई ‘मध्यरातको डकैती’ को संज्ञा दिएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने निर्णय गरेपछि पुनले सामाजिक सञ्‍जालमा लेखेका छन्, ‘मध्यरातमा डकैती गरियो/ ज्ञानेन्द्र शाहले पनि शुक्रबार र मध्यरात नै रोज्ने गर्थे ।’
विश्वप्रकाशको चेतावनी : संविधानको सा’मूहिक ब’ला’त्कारको दुश्परिणाम महंगो पर्नेछ
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधानको सा’मूहिक ब’लात्कार दूश्परिणाम महँगो पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीलाई चे’तावनी दिएका छन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकले संसद विघटन गर्न सिफारिश गरेर प्रतिनिधिसभाको नयाँ मिति घोषणा गरेलगत्तै कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन्-`अहंकारको वृक्षमा विनाशको फल लाग्छ´, सिंगो महाभारतको संक्षिप्त सार यत्ति हो ! बुझि राख्नु रास्ट्रपति महोदया र कमरेड प्रधानमन्त्रीजि, महाब्याधिका बेला मध्यावधिको रंगीन सपना महंगो पर्नेछ ! संविधानको सामुहिक बलात्कारको दुश्परिणाम महंगो पर्नेछ l”